Maxaa sababay In uu Ciyaartoyga Kevin Constant uu Ka Baxo garoonka Ciyaartii oo Socota? Bal Hoos Qooraanso. - Cakaara News
Italy(CakaaraSport) Arbaco July 24,2013.Ciyaaryahanka kooxda AC Milan Kevin Constant ayaa garoonka gabi ahaanba ka baxay xili ay socotay Ciyaarta koobka seddexgeesoodka Trofeo TIM ka dib markii uu hadalo cunsurinimo ah kala kulmay taageerayaasha kooxda Sassuolo. Kooxda ku cusub horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan ayaa hanatay oo kulankii uu ka baxay ugu danbeyna badisay, laakiin waxaa koobka saaxiibtinimo hareeyay arintaan la xiriirta cunsuriyada ee keentay inuu ciyaaryahanka garoonka isaga baxo.
Kevin Constant ayaa xili uu rabay in uu kubad dhanka cornerka u soo tuurayay Milan balse ay dhagihiisa ku soo dhaceen taageerayaasha Sassuolo ay ku lahaayeen ereyo cunsurinimo,taasoo sababtay inuu si cadho leh uu kubadiiba si xoogan ugu laago dhankii taageerayaasha,islamarkaana uu gabi ahaanba ka huleelo Garoonkii iyo ciyaartii uu ku jirayba.
Falkan ayaa ku soo beegmaya xilli Lega Calcio ay sheegeen bishii May inay soo saareen sharciyo adag oo ay kula dagaalmayaan cunsuriyada ka dhex jirta kubada cagta gaar ahaan kubada Talyaaniga. Kevin Constant ayaana ciyaarta ka dib soo dhigay bogiisa Twitter sawir ay ku qoran tahay ‘Jooji Faquuqa’ islamarkaana ay ku sawiran yihiin Balotelli, Baoteng iyo Niang. Constant ayaan aheyn ciyaaryahankii ugu horeeyay ee sidaan sameeya waxaa hore sidaan oo kale garoon uga baxay ciyaar saaxiibtinimo Kevin Prince Baoteng.